उत्तरसँग जोडिने रेल पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ -
August 30, 2020 adminLeaveaComment on उत्तरसँग जोडिने रेल पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ
हवाइ जहाजमार्फत जोडिँदाका सीमाहरु छन् । त्यो खर्चिलो पनि छ । उड्डयनमा ‘प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट कनेक्सन’ हुन्छ । त्यसले ‘बल्क कार्गो’ बोक्न सक्दैन । त्यसले औद्योगीकरणको साना (लाइट) उद्योगलाई मात्रै काम गर्ला, ठूला (हेभी) कम्पनीलाई लजिस्टिक पक्षबाट आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाएर सहयोग गर्न सक्दैन हवाइ यातायातले ।
यसलाई हामीले विशद्ध ‘फाइनान्सियल रेट अफ रिटर्न’ (बनेपछि रेलबाट उठ्ने राजस्व) का आधारमा हेर्न हुँदैन । यो हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल पनि हो, यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ‘इन्टिग्रेसन’ पनि हो । सँगै, यसले ल्याउने आर्थिक लाभका पक्षहरु पनि जोडिन्छन् ।त्यसैले हामी रेलबाट उत्तरमा चीनतर्फ जोडिनुपर्छ ।
म प्राविधिक त हैन । म रेलको विज्ञ पनि हैन । तर, मैले जति पनि रेल्वे बुझेका प्राविधिहरुसँग कुराकानी गरेँ, उत्तरतर्फबाट रेल ल्याउन खर्चिलो छ, गाह्रो छ, तर सम्भव छ भन्नुहुन्छ । नेपालको जस्तै कठिन भूगोलमा चीनले छेन्दुबाट ल्यासासम्म जोड्ने रेल बनाइरहेको पनि छ । हाम्रोमा निर्माण गर्न अझ सहज नहोला । नेपालमा आउने रेल छेन्दुबाट आउनेभन्दा भूगोलका हिसावले अप्ठेरो त हैन, उचाइको फरक लगायतका कारण निकै असहज चाँहि छ । यो प्राविधिकरुपमा कति सम्भाव्य भनेर प्राविधिकले नै भनुन् । तर, यो कुनै नाफा-घाटाको भनेर हेर्ने परियोजना हैन । यो रेलमार्ग चाहिन्छ ।
यसको महत्व र औचित्यका आधारमा यसलाई पहिलो (टप मस्ट) प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो नेपाललाई अन्य देशसँग जोड्ने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गराउने परियोजना हो । यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा हुुनुपर्ने हो । अहिले किन सरकार पूर्व-पश्चिम रेलमार्गतिर किन गएको हो भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
रणनीतिक महत्वका हिसाबले हेर्दा दक्षिण (भारत)बाट नेपाल रेलले जोडिने कुरा व्यवसायिकरुपमा नै अर्थपूर्ण छ । त्यसले त कोलकत्तादेखि कै कार्गोलाई फेसिलेटेड गर्छ । हाम्रो ढुवानी खर्च घटाइदिन्छ र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइदिन्छ ।
यो ठूलो परियोजना हो, चिनियाँहरुको सहभागिता हुन्छ । तर, ऊ विवादमा पर्छ भने किन आउँछ ? अहिले आएर यो रेलमार्ग हामीलाई चाहिन्छ कि चाँहिदैन ? भन्ने काम गर्नुहुँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री भएका मान्छेले नै अनुदानमा बनाइदिए चाहिन्छ, ऋण लिएर बनाउनुहुँदैन भन्नुभयो । त्यसले त ‘अनुदान भनेको काम नलाग्ने परियोजनामा लगाए हुन्छ’ भन्ने अर्थ लाग्छ । मलाई यो तर्क उपयुक्त लागेन ।
त्योभन्दा ठूलो कुरा, एक-दुईजनालाई मात्रै रेल्वे इञ्जिनियरिङ सिकाएर हुँदैन । संख्या ठूलो बनाउनुपर्छ । रेल भनेको मेकानिकल कुरा मात्रै हैन, अरु धेरै पक्ष यसमा जोडिन्छन् । ५० जना जति इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना गरी भर्ना सकेर उहाँहरुलाई पढ्न चीनमा पठाउँदा हुन्छ । उदार ढंगले राखियो भने चीनले त्यो सहयोग गर्छ । त्यसैले हो हाम्रो क्षमता विकास हुने र प्रविधि हस्तातरण हुने ।